Ukubuka kwe-Ballard - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Julia
Itholakala phezulu egqumeni elibheke umlando weFrench Lick Resort and Spa. Ikhaya lesitayela se-Craftsman Charming, ibanga lokuhamba ukuya ehhotela, amakhasino, kanye nezindawo zokudlela ze-French Lick zedolobha kanye nokuthenga. Ukushayela okufushane ukuya ePatoka Lake. Niziphethe kahle, abangani abanoboya bamukelekile.* (bona 'amanye amanothi' ukuze uthole imininingwane)
Ungahlala kuvulandi ongaphambili futhi ujabulele inkomishi yekhofi ekuseni. Khona-ke ungakwazi ukuhamba edolobheni futhi uhlole izitolo eziyingqayizivele. Hamba uyohlola i-French Lick Hotel. Vakashela Casino. Bese uthatha inqola uye eWest Baden futhi ujabulele ubuhle bezingadi kanye nedome. Iba nesidlo sakusihlwa esimnandi kunoma iyiphi inombolo yezindawo zokudlela ngesi-French Lick. Ekupheleni kosuku, jabulela ukuhlala emphemeni wangemuva futhi uphumule. Indawo enhle yokujabulela ukuvakasha kwakho ku-French Lick!
4.97 · 228 okushiwo abanye
Leli khaya lisendaweni ephephile nethule. Isegqumeni eliwumqansa. Uma wehlela phansi egqumeni, usedolobheni lase-French Lick.
Angikho kusayithi, ukuze ube nobumfihlo bakho. Vele ungithumelele umlayezo noma ushayele futhi ngizojabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, nginikeze izincomo ngalokho okufanele ukubone nokukwenza endaweni, noma ukusiza nganoma yiziphi izinkinga ongahlangabezana nazo.
Angikho kusayithi, ukuze ube nobumfihlo bakho. Vele ungithumelele umlayezo noma ushayele futhi ngizojabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, nginikeze izincomo ngalokho okufanele u…